Daryeelka Dhalmada Ka Dib (Postnatal Care)
Author Topic: Daryeelka Dhalmada Ka Dib (Postnatal Care) (Read 41760 times)
« on: January 21, 2008, 02:07:07 AM »
Ka dib marka aad umushid, kalkaaliso ayaa ku hubin doonta oo ka jawaabi doonta wixii aad su'aalo qabtid. Inta aad cisbitaalka ku jirtid, kalkaalisooyinku waxay ku bari doonaan sida aad naftaada iyo ilmahaaga u daryeeli lahayd.
Isbeddelada ku Dhaca Jirkaaga
Kalkaaliso ayaa taaban doonta calooshaada si ay u hubiso ilmo-galeenkaaga inta aad ku jirtid cisbitaalka.
Haddii ilmo-galeenkaagu jilicsan yahay, kalkaalisadaada ayaa riixriixi doonta calooshaada si ay ilmo-galeenka ugu kaalmeyso inuu adkaado ama dib u gurto oo booskiisii ku laabto.
Dhiig ayaa hoostaada ka iman doona mudo ah 2-4 todobaad. Inta lagu jiro maalmaha ugu horeeya, dhiigga kaa socda waxa uu u eeg yahay dhiigga caadada oo culus. Waxa laga yaabaa inay kaa soo baxaan xinjiro dhiig oo yaryar. Dhiig-baxu waa uu yaraan doonaa waxana uu isu beddeli doonaa casaan khafiif ah, madow cawlan, ka dibna cadaan.
Ha isticmaalin suufka hoosta la galiyo (tampons). Isticmaalka qoyaan-celis (pads).
Naasahaaga waxa ka buuxsami doona caano 3-5 maalmood ka dib umusha waxana ay noqon doonaan kuwo adag oo xanuun leh. Waxa laga yaabaa inay da'aan marmarka qaarkood.
Waxa laga yaabaa in calooshu ku adkaato ama ku jilicdo. Waxa laga yaabaa in laguu qoro dawo.
U sheeg kalkaalisadaada haddii kaadida dhibaato kaa haysato.
Gargaar weydiiso shaqaalaha dhawrka mar ee ugu horeeya ee aad ka degaysid sariirta.
Fadhiiso dhawr daqiiqadood ka hor inta aanad bilaabin socod.
Haddii aad dareentid wareer ama dawakh inta aad ku jirtid musqusha, u waco qofkii kaa agdhaw.
Ku socsoco qolalka dhexdooda 3-4 jeer maalintii mudo ah 5-10 daqiiqadood.
Waxa laga yaabaa inaad dareentid daal iyo gaajo. Waxa dheecaano lagaa siin doonaa faleebo ama xidid-galis (IV) lagu rakibo gacantaada ama cududaada ilaa aad si fiican wax u cabi kartid. Cab cabitaano badan. Waxa marka hore laguu keeni doonaa cuntooyin fudud ka dibna waxa aad cuni kartaa cuntadaadii caadiga ahayd.
Xanuun iyo maroojis waa caadi. Waxa laga yaabaa in toliddu keentu gubasho. Weydiiso dawo xanuun marka aad u baahan tahay. Waxa laga yaabaa in dawadu aanay kaa kaxeyn xanuunka laakiin way kaa yareyn doontaa.
Maamul xanuunkaaga si aad u daryeeli kartid naftaada, iyo ilmahaaga oo aad fifircooni u yeelatid.
Sida loo maamulo xanuunka kaa haya aagga ku yaala inta u dhexeysa marinka ilmaha (hoosta haweenayda) iyo marinka saxarada (futada) (inta u dhexeysa labada marin) (perineal area):
Saar xidhmo baraf ah wakhtiyo gaaban aagga u dhexeeya labada marin maalinta ugu horeysa si uu kaaga yaraado xanuunka iyo bararku.
Qaado qubeys/maydhasho diiran. Qubeyska waxa la bilaabi karaa 24 saacadood ka dib umusha.
Mari dawo korka la mariyo sida mid buufis ama labeen ah si ay kaaga yareyso xanuunka.
Daryeelka Inta u Dhexeysa Labada Marin
Ka dhig nadiif aagga u dhexeeya labada marin (hoosta iyo futada) si aad uga ilaalisid caabuqid oo aad urta u joojisid. Waxa tan loo yaqaanaa daryeelka inta u dhexeysa labada marin (perineal care). Waxa lagu siin doonaa weel caag ah oo aad ka buuxisid biyo diiran. Wakhti kasta oo aad isticmaashid musqusha, isticmaal weelka caagga ah si aad biyo diiran ugu tuujisid aagga u dhexeeya labada marin (hoosta iyo futada). Beddel qoyaan-celiskaaga wakhti kasta oo aad isticmaashid musqusha.
Gacmahaaga ku dhaq saabuun iyo biyo.
Qubeyska Sare-joogga ah
Waxa laga yaabaa in qubeys sare-joogga ahi kuu keeno dareen wacnaan oo uu kaa gargaaro inaad nafistid. U yeero qof kaa gargaara qubeyska ugu horeeya.
Ka-bixista Cisbitaalka iyo Tagista Guriga
Kalkaalisadaada ayaa kaa gargaari doonta sidii adiga iyo ilmahaagu aad guriga ugu noqon lahaydeen. Waxa lagu siin doonaa war ku saabsan sidii aad u daryeeli lahayd naftaada iyo ilmahaaga.
Waxa laga yaabaa in daryeelka ay ka mid tahay:
Koridda jaranjaro 1-2 jeer maalintii.
Sare ha u qaadin wax ka culus ilmahaaga dhashay.
Hel qof kaa gargaara shaqada guriga ugu yaraan 2 todobaad.
Ha kaxeyn baabuur ugu yaraan 2 todobaad.
Ha yeelan galmo ilaa uu ka fasaxo dhakhtarkaagu. Dhakhtarkaaga kala hadal xadeynta uurka ama kala-dheereynta uurka. Naas-nuujintu kaama horjoogsanayso in aad uur yeelatid.
Ha ku noqon shaqada ilaa dhakhtarkaagu kuu fasaxayo.
Isla markiiba dhakhtarka ku laabo haddii aad leedahay:
Qandho ka badan 101 darajo F ama 38 darajo C.
Calaamadaha caabuqidda naaska sida qandho, danqasho, casaan, ama meel kulul oo adkaatay, oo ku taala hal naas ama labadaba.
Dhiig-bax culus oo hoosta ah oo keenaya in uu kaa qoyo hal qoyaan-celis saacaddiiba mudo ah laba saacadood ama aad leedahay xinjiro dhiig oo waaweyn.
Dheecaan hoostaada ka yimaada oo ur xun—dheecaanka caadiga ahi waxa ka ur yahay caadadaada dhiigga.
Dhibaato ah kaadida oo uu ku jiro bilaabista kaadida gubasho ama xanuun.
Kaama iman saxaro mudo ah 3 maalmood.
Meel kulul oo adag oo ku taala lugtaada ama xanuun ah inta hoose ee lugtaada.
Xanuun daran ama joogto ah ama maroojis.
Madax-xanuun, aragga indhaha oo isku darsamay ama baro hor socda indhahaaga oo aan tagaynin.
Dareen ah murugo weyn ama dareen ah in aad waxyeelo u geysatid naftaada ama ilmahaaga.
Wac isbitaalka dhawrka maalmood ee ugu horeeya ka dib marka aad guriga ku laabatid si aad u ballansatid booqasho la-sii-socod ah gudaha 4-6 todobaad. La hadal dhakhtarkaaga ama kalkaalisada haddii aad qabtid su'aalo ama walwal.
Hadii aad faahfaahin u baahan tahay ama su'aalo ka qabtid qoraalkaan iigu soo dir halkaan: http://somalidoc.com/smf/index.php?board=31.0
Views: 7874 August 09, 2011, 04:37:49 PM
Views: 7307 April 14, 2012, 02:05:10 AM
Views: 13023 January 18, 2010, 04:09:25 PM
Views: 6651 January 25, 2010, 05:09:10 PM
Views: 18246 December 22, 2010, 06:25:57 PM